Isikhokelo esisuka kwi-Semalt yokuCoca i-Chrome yeziThuthi, i-Pop-Ups kunye ne-Malware
Uninzi lwamaxesha amaninzi, abantu bayakhalaza ukuba iGoogle Chrome yabo ibuye ibuye ibuyele kwakhona kwiiwebhusayithi ezingafunekiyo kunye neentengiso ezingabonakaliyo. Ezi zinto zibonakala xa sibheka kwi-intanethi okanye sizama ukufikelela kwiiprojethi zethu zeendaba zoluntu. Ukuba ubona izinto ezinjalo imihla ngemihla, kunamathuba ukuba inkqubo yakho yekhompyuter isulelwe ngeenkqubo ezingafunekiyo okanye i-malware.
uFrank Abagnale, uMphathi weNtengo kaMthengi we-10 (Semalt , uchaza indlela yokukhulula i-Chrome yakho kwiintengiso ezixhalabisayo, i-pop-ups kunye ne-malware.
Iingxaki ngeGoogle Chrome
Nangona ukhangele i-intanethi, xa ubona nayiphi na le micimbi ngeGoogle Chrome, unokufakela inkqubo ekhulelwe okanye i-malware kwindlela yekhompyutha yakho:
Iintengiso ze-Pop-up zivela kwakhona.
Iinjongo zakho ze-injini yokukhangela okanye i-homepage ye-Chrome ishintsha izicwangciso zayo okanye isetyenziswe kwenye iwebhusayithi ngokuzenzekelayo.
Ukuba ubona izixhobo zeetraki ezingaziwa, ukongezwa kwe-Chrome okanye izinto ezingaqhelekanga kanye ngeyure.
Uya kuqondiswa kwiiwebhusayithi eziyaziwayo kunye nezixhobo eziqhelekileyo zokulanda izicelo.
Indlela yokucoca i-Chrome yeentengiso ezingafunekiyo, i-pop-ups, kunye ne-malware
Okokuqala, kubalulekile ukuba ungalokothi ukhuphe isofthiwe engaziwayo okanye izinto ezivela kwi-intanethi..Kufuneka ugweme ukutyelela iiwebhusayithi ezindala njengoko zikuninzi ziqulethe iimpawu zentsholongwane kunye ne-malware.
Unokucoca i-Chrome yeentengiso ezingafunekiyo, i-pop-ups, kunye ne-malware ngokugcina engqondweni izinto ezilandelayo.
1: Susa iinkqubo ezingafunekiyo ukusuka kwi-Chrome (Windows kuphela)
Ukuba usebenzisa iWindows okanye inkqubo efanayo yokusebenza, kufuneka usebenzise i-Chrome Cleanup Tool ekhangela ikhomputha yakho kwiiprogram ze-malware kunye nezikrokra, zinika iindlela ezilungileyo zokuzisusa zonke. Ukuba usebenzisa i-Linux okanye i-Mac khompyutha, kufuneka uhambise kwisinyathelo esilandelayo. Yiya kwi-Chrome Cleanup Tool kwikhompyutheni yeWindows kwaye ukhupha isofthiwe ngokukhawuleza. Cofa Wamkele kwaye Ukhuphe uze unike ixesha lokuba ulandwe. Xa ukukhuphela kuphelile, iWindows iya kucela ukuba usebenze ifayili okanye cha; kufuneka ukhethe ukukhetha inketho ukwenzela ukuba i-Chrome Cleanup Tool ithawule ngokuchanekileyo idivayisi yakho. Kufuneka uqakraze kwakhona ukhetho lokuSusa ukurhoxisa iinkqubo ezityhaxisayo kunye neentsholongwane.
2: Susa iinkqubo ezingafunekiyo (zonke iikhomputha)
Ukuba uthenge okanye ulayishe inkqubo yokulwa ne-malware okanye inkqubo ye-antivirus, kufuneka uyifake ngokukhawuleza kwaye ugijime ukulahla iifayile ezinobungozi kunye nezikrokre. Ungazama kwakhona i-Malwarebytes; le projekti ye-malware ingcono kakhulu kunezinye iinkqubo ezifanayo njengoko isusa iifayile ezingenasidingo kunye nedatha kwifowuni yakho kwimizuzu. Ukuba ufake le projekthi, kukho amathuba ukuba iThuluzi lokuCoca i-Chrome lingayi kusebenza ngokufanelekileyo.
3: Hlaziya kwakhona isetyu sakho sakho (zonke iikhomputha)
Unokusetha kwakhona izicwangciso zesiphequluli sakho ukulahla i-malware kunye neentsholongwane. Ngenxa yoko, kufuneka uvule i-Chrome kwiikhompyutha zakho kwaye nqakraza kwikhetho yezikhetho. Emva koko kufuneka uqakraza kwi-Advanced and Reset options ukuze ubuyekeze izicwangciso zakho zesiphequluli, kwaye oku kusebenza nayiphi na ikhompyutha okanye izixhobo zeselula. Xa ujongene naluphi na ingxaki, sincoma ukuba unike ingxelo kwingxaki kumniki-software okanye ukhangele i-Forum yoNcedo lwe-Chrome Source .